Oromo News 04.20.21 | KWIT
Oromo News 04.20.21
Oromo News 04/20/2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti sababa Covid-19 namni haarawa 5 du’uu gabaase, namni haarawa qabame ammo 550 yoo tau Woodbury County keessati namni haarawa qabame 16 dha.
Jiraattonni Iowa parsanti 40% ta’an talaali corona virus akka fudhachuu hin feene himan. Lakkoofsi kunis torbaan darbee irraa dabalee jira, irra guddini isaa northwest Iowa keessati.
Counties dhan keessati talaali corona virus kana kan fudhatuu yoo kan hin jiraatinni kan waradaan kan kuffisu ta’a.
Durbuaan mana fayyaa Siouxland akka jedhetti Woodbury County torbaan kana taalali corona virus gaafatani jiru jedhan. Umriin isaani 16 fi sanii olta’an parsantiin 30% guutumaan guututi taalali corona virus akka fudhatan himan.
Siouxland District Health akka ibsetti talaali corona virus gudichaa torbaan dhufu April 27th kan kennamu bakka Siouxland Expo Center tti namni yeroo dalagaa isaatinille ala fudhachuu barbaadde akka dandau himan.
Nebraska administered torbaan darbe keessa talaali corona virus jiraattota 135,000 kan akka kennee jiru gabaase.
Jiraattoni Nebraska umrii 16 fi sanii ol ta’an parsantiin 36% talaali corona virus guutumatti fudhatani jiru.
State akka gabaasetti waloogalatti namni haarawa qabame 500 yoo tau 168 ammoo kan hospitaala yaalama jiruudha.
Iowa tti, namni 215 hospitaala kan yaalama jiruudha, namni daarzana olii hospitaala Sioux City lama keessati kan yaalama jiruudha.
Akka gabaasa midhaani torbaan kanaati akka karoora wagga kanaati boqqoolo paranri 4% tau addaan fafageesun dhaabani jiru.
USDA’S akka gabaasetti torbaan darbe baayinni midhan dhaabudhaf haalawa mijaawa ture jedhe.
Boqqolloon harka lama saddafaa lafa keessa waan jiruuf Qonnaan bultoonni harka isaani irrati gudinna mulisani jiru.
Sioux City Council galii arti kan wagga walitti guru sochoosuf sagalee guutun kan kenname ArtSplach kara magaala qixxeeti sochau jiru.
Qophiinis guyyaa ayyaana hojattootaf torbaa dhuma irrati September 2nd fi hanga 5th tti qabanii jiru.
Manni fayyaa Siouxland akka gabaasetti talaali corona virus kan itti aanu April 27th Siouxland Expo Center akka tae hime. Seaati clinica illee namoota yeroo dalagaa isaani allati beelama qabachuu barbaadanif akka bana tae hime.
Ummanii Aanaa mana fayyaa Siouxland lakkoofsa 712 234 3922 bilbiluudhan beelama qabachuu ni dandau.